Funda malunga ne-Kaplan ACT Test Options Prep
Funda malunga neendlela zovavanyo lwe-ACT zovavanyo ezilungiselelwe ngu-Kaplan
Kukho iindlela ezininzi zokuphucula izikolo zakho ze-ACT. Abanye bakhululekile, kwaye ngenye indlela unakho ukuhlawula amawaka eedola ukuthenga isivumelwano kunye nomcebisi wekholeji yangasese. Kwoluhlu olungezansi, ndibonisa ezinye zeemveliso eziphambili zovavanyo lwe-ACT ezenziwa ngu-Kaplan, i-long-time leader in the prep industry. I-Kaplan ngoku ineenkqubo zokuhanjiswa kwee-intanethi, kwaye ke iinkonzo zabo ziyafumaneka kubafundi nasiphi na indawo emhlabeni. Ukuba ukhetha indawo yokufundela izitena kunye nomdaka, uKaplan uninzi lwazo.
U-$ 0 - Uvavanyo lweeNzame kunye noDiscotics
Kaplan ILogo. ILogo Courtesy of Kaplan
I-Kaplan ineendlela ezininzi ezinokukunceda ukulungiselela uMTHETHO mahhala. Awuyi kufumana nayiphi na uqeqesho lwe-Kaplan okanye uqeqesho lomntu kunye nale ndlela, kodwa unokuvavanya umgangatho wakho wokulungelelanisa umThetho. Le mveliso ayiyi kuhlawula i penny, kodwa ezinye ziza kufuna ukuba udale iphrofayili yomsebenzisi.
Thatha i-Free ACT Umthamo weTurbo : Thatha umThetho we-intanethi okhutshwe kwi-intanethi ngxelo yengxelo epheleleyo.
Isifundo se-ACT Cram samahhala : Yenza ukufunda ngokukhululekileyo ngaphambi kokuvavanya ixesha kunye neseshoni ye-Kaplan
I-20 ye-20 - UMthetho we-2016 iNkulumbuso (incwadi eneDVD)
Ukuba ungumfundi okhuthazayo kunye noqeqesho, unokuphucula umgangatho wakho wemisebenzi ngaphandle kokuchitha imali kwi-prep test course. UMthetho we-Kaplan weNkulumbuso 2016-17 kunye neDVD ibandakanya iimvavanyo ezizii- 8 ezizeleyo zokuhlola iimvavanyo, iingcebiso kunye namaqhinga kwimimandla emibuzo eyahlukeneyo, kunye nokufikelela kwiinkcukacha ezininzi ezinokusetyenziswa kwi-intanethi. Incwadi ibonisa i-$ 31.99, kodwa ungayifumana i-$ 20. Hlola apha apha: UMphathiswa we-Kaplan uNkulumbuso 2016-2017.
$ 299 - UMTHETHO WENKQUBO YOKUFUNA I-Self-Paced Prep Course
UMTHETHO KUNCEDO ikunika inkululeko enkulu yokusebenza kwizakhono zakho ze-ACT xa kulungele kuwe. Le khosi eyaziwayo ingabizi kakhulu kunezinye iindidi ze-ACT emakethe. Isofthiwe yenza isicwangciso sovavanyo lwesithethe esekelwe kwindlela osebenza ngayo kwi-test test. Ngalo mveliso uza kuba nokufikelela kwimibandela engamawaka e-practice, isikhokelo kunye nezicwangciso zokusombulula iintlobo ezahlukeneyo zemibuzo, ukufundwa kweemfuno zevidiyo kwi-intanethi, inkqubela phambili kunye nokulandelwa kwemisebenzi yasekhaya, kunye neemvavanyo ezine ezide ezizalisiweyo. Enye into ebalulekileyo yeeklasini ze-Kaplan kukuba uza kuphinda ufumane imali yakho xa izikolo zakho ze-ACT zingaphuculanga.
Khangela ikhosi apha: UMTHETHO KUNCEDO
$ 749 - I-Class Classroom Online
I-online Classroom version ye-ACT prep inempawu ezifanayo njengenguqulo yesayithi echazwe apha ngezantsi ngaphandle kokuba uya kusebenza kunye nomqeqeshi wakho kwi-intanethi kuneklasini. Oku kuyimfuneko ukuba uhlala kwindawo ekukude, kwaye inokubhenela kwabanye abakhetha ukufumana umyalelo wokuxhumeka kwi-intanethi kwiindawo zokufundela eziqhelekileyo. Njengokuba kukho ingosi yesayithi, uya kufumana iimviwo ezine ezilandelwayo, iimvavanyo ezi-6 ezongezelelweyo zokuvavanya, imibuzo engaphezu kwewaka yokuqhuba, i-database yezifundo zokufunda, isicwangciso sesifundo senkcubeko, ukulandelela inkqubela phambili, iiyure ezingama-18 zokufundisa ngokuphila kunye nomqeqeshi kunye ukufundisa abancedisayo kunye nesiqinisekiso sokubuyisela imali xa izikolo zakho zingaphuculanga.
Khangela ikhosi apha: ACT Classroomroom Online
$ 749 - Gcwalisa IMITHETHO YOKUQALA - KwiSayithi
Inkambo yeCaplan yokuzikhusela kunye nencwadi ye-ACT inkulu kubafundi abazondayo kwaye baqeqesha kakhulu. Abafundi abaninzi basebenze bhetele kunye nesakhiwo esiphezulu. Ukuba ukhona kwiqela eligqibela, umntu ongeyena-person SAT Prep course ingaba yinto efanelekileyo. Le khosi eyaziwayo yiPaplan. Uza kufumana iiyure ezingama-18 zoqeqesho kwiziko le-Kaplan, iimvavanyo ezimbini ezifunyenwe kumntu, iimvavanyo ezimbini zokuthengwa kwe-intanethi, iimvavanyo ezi-6 ezongezelelweyo, ukulandelelana nokulandelela ukusebenza, isicwangciso esicwangcisiweyo esifanelekileyo, amavidiyo amaninzi kwi-inthanethi, kunye nokusebenza okungaphezulu kwewaka. imibuzo. Nje ngezinye iikhosi, uza kufumana imali yakho ukuba izikolo zakho zingahambi.
Khangela ikhosi apha: ACT Classroom In-Person
US $ 1099 - Ulungelelaniso olungenamkhawulo (PSAT, SAT & ACT)
Ngetekethi yexabiso lemali eliyinkulungwane, iKholeji yokuPhumela i-Advantage yintalo-mali ebalulekileyo (nangona kuncinci kunokuba uhlawule ngokuqhelekileyo nayiphi na indlela yokufundisa ngasese). Ukuba ixabiso liphela ngaphandle kohlahlo lwabiwo-mali, buyela kwizinto ezikhethiweyo # 1 no-# 2 kwaye ugcine engqondweni ukuba ukufundiswa ngokuzimeleyo kunokuziphucula amanqaku akho kunye nayiphi na inkambo yokulungiselela. Ukuba ixabiso aliyithintelo, le klasi ingaba yinto ekhethekileyo yokukhetha ama-sophomores kunye nokunyuka kwabantwana abancinci malunga nokufumana iindidi ze-PSAT, i-SAT kunye ne-ACT izikolo eziza kufuneka ziphumelele ukuphumelela i-scholarships kwaye zifike kwezinye zelizwe iikholeji ezikhethiweyo .
Kulula ukungawuboni i-PSAT inxalenye yalo mveliso kuba umcimbi we-SAT kunye noMTHETHO uninzi kakhulu kwisigqibo esivumelekileyo sokwamkela. Nangona kunjalo, utyalo-mali kwi-PSAT prep unokukuhlawula kwakhona - uvavanyo lusetshenziselwa ukufaneleka abafundi kubafundi bamaZwe eMveli, kwaye iikholeji ezininzi zisebenzisa iziphumo zeMveliso yeSizwe ukunikezela ngeengxowa-mali. I-College Prep Benefits iza neeyure ezisi-9 zeCandelo leNkxaso-mpahla ye-PSAT kunye novavanyo oluphindwe kabini.
I-College Prep Benefits iza kunye nepharityhulam ye-ACT Classroom epheleleyo yee-749 kunye ne-$ 749 ye-SAT Classroom. Nganye yezo zifundo zineenkcukacha ezininzi ezifunyenwe kwaye ezingenakulungiswa. Uza kufumana i-$ 299 yezifundo zeMat Funentals, izicwangciso zokufunda ezizenzekelayo kuzo zonke iimviwo, iilayibrari zevidiyo ezifundiswayo kwi-intanethi, amawaka emisebenzi yokusebenza, kunye nenkqubela kunye nokulandelela ukusebenza.
Ukuba ungumntu ophezulu ukhangele ukuba wenze umzuzu wokugqibela wokuphambanisa umlinganiselo wakho we-ACT, musa ukutyalo kwi-Prep Unlimited Prep. Le khosi yenza ingqiqo xa useneminyaka yokuqala ekufundeni kwesikolo sakho esiphakamileyo kuba ufumana uvavanyo lokungagqibekanga kunyaka wakho ophezulu. Ithegi yexabiso le-1499 yexabiso elinguye ayiyikutshintsha i-pocket, kodwa ayikho into engqiqweni ukuba ibonwe njengemvavanyo emininzi, utyalo-mali oluninzi lweminyaka.
Khangela ikhosi apha: UkuPhatha okungenamkhawulo
I-Kaplan UMTHETHO WOMSEBENZI WOKWENZA I-Optoins
Uluhlu olukhankanywe ngasentla alubandakanyi konke okukhethwa kovavanyo lwe-prep oluvela ku-Kaplan, njenge-package ye-One-one-Premier Tutoring package. Khangela zonke iimveliso apha: I-Kaplan ACT Test Test Prep Options
I-Fan Brush Painting
Iprofayile yeentlobo: i-Threadfin Shad
Inkcazo kunye nemizekelo yeRottic and Non-Rhotic Speech
Indlela yokudibanisa isenzi sesiFrentshi 'Finir' (ukugqiba)